Himalaya Dainik » बिदेसको ‘पि अार ‘छ भन्दैमा हाम्रा कलिला चेली अंकल उमेरकालाई जिम्मा नलगाउँ
बिदेसको ‘पि अार ‘छ भन्दैमा हाम्रा कलिला चेली अंकल उमेरकालाई जिम्मा नलगाउँ
– रवि लामीछाने
समाजमा एउटा कुरीति मौलाएको छ । आज त्यसबारे खुलेर चर्चा गर्न चाहान्छु । विदेशको पिआर, ग्रिनकार्ड वा सिटिजनशिप भएको केटो पाएपछि बाबु आमानै लागेर विहे गरिदिने गरेका छन् । चाहे त्यो दोब्बर उमेरको किन नहोस् वा अन्य अवगुणले भरिपूर्ण नै किन नहोस् ।
सिंगै अपार्टमेन्ट भाडामा लिदा मंहगो पर्ने भएर नक्कली जोडी बनेर समेत कसैसँग बस्नु पर्ने बाध्यतामा केहि नेपाली चेलीहरु परेका छन् ।
यहाँ उमेर पुगेको हर कोही व्यक्ति माया प्रेममा पर्न सक्दछन् । २१ वर्षकी महिलाले ८० बर्षको पुरुषसँग विवाह गर्न सक्छन् । मन परेपछि, माया लागेपछि उमेरले छेक्दैन । तर कहिले नभेटेको, नेदेखेको, नबुझेको मानिस छ, जो सँग विदेशी पिआर हुनु बाहेक अर्को कुनै गुण नै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरुको ज्यान दिएर खोजी गर्दै छोरी चेली भिडाउन खोज्नु चाँहि सामाजिक अपराध हो की होइन ?
विदेशमा भएका योग्य, क्षमतावान, संस्कारी, शिक्षित व्यक्तिहरुप्रति यो विषय लक्षित छैन । विदेशमा हुनु, न त गुण हो, न त अवगुण नै । तर एउटा पिआर र ग्रिनकार्ड देखाएर उमेर ढल्केको तालु फुलेको वा खुइलिएको बुढो मान्छे खडा गरिदिएर आफ्नो सुकुमारी छोरी चेलीलाई थान्को लगाउन खोज्नेहरुलाइ्र्र म त अपराधी नै भन्छु ।
कतिपय अवस्थामा केही चेलीहरुसमेत पिआर होल्डरको खोजीमा लागेको पाइन्छ । उमेर मिल्छ, मन मिल्छ, भावना मिल्छ, कुरा मिल्छ, माया लाग्छ र विदेश गएर सँगै बस्न पाइन्छ भने ह्वाइ नट ? हुन्छ मज्जाले हुन्छ ।
विदेशमा रहेका अधिकांश दाजुभाइहरुलाई अति नै दुख छ । वर्षमा १-२ पटक मौका पाउदा खिचेर हालेको फोटो हो त्यो । कति हेण्डसम देखिएको मेरो राजा भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको राजालाई त्यहाँको कामको फोटो, भिडियो पनि हाल्नु भन्नुस्, अनि राजाको व्याण्ड बाजा बज्छ कि बज्दैन थाहा हुन्छ ।
केहि रमाइलो तरिकाले भनेको मात्रै हुँ, यसमा कसैले मन नदुखाउनु होला । वास्तविकता थाहा नपाई केवल विदेश जान पाइन्छ, जीन्दगी रमाइलो र सजिलो हुन्छ भनेर अंकलहरुसँग विवाह गरि विदेश पुगेका कयौँ चेलीहरुसँग पछुताउनु बाहेक अर्को उपाय छैन ।
सबैले होइन धेरैले । समाजमा फैलिदै गरेको यो विकृत रोक्न जरुरी छ । विशेष गरेर म छोरी चेलीहरुलाई यसबाट बच्न अनुरोध गर्दछु । विदेश जाने वित्तिकै जीन्दगीको सारा समस्या एक सटमा हल हुन्छन् भन्ने सोच्नु भनेको ठुलो भ्रममा हुनु हो । केहि सुविधा विदेशमा जरुर छ तर अध्ययनहरुले बताएका छन् कि विकशित देशका मानिसहरु सबैभन्दा बढी तनाव, डिप्रेशन, र विभिन्न मानसिक रोगले ग्रसित छन् ।
तर उदेश्य एउटै मात्र हो कि, कलिला चेलीहरुलाई जबरजस्ती अंकल उमेरकाहरुको जिम्मा लगाएर कन्यादान नगरौँ । धन छ, विदेशको पिआर छ भन्दैमा कलिला चेलीहरु छानीछानी विहे गर्न सक्छु भनेर फुर्ती फार्ती पनि नलगाउँ । यि दुवै गम्भीर सामाजिक अपराध हुन् । हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नु खाएकै बेस आनन्दी मनले ।
प्रकाशित मिति २५ कार्तिक २०७५, आईतवार ००:२६